एपीएफद्वारा दोस्रो सभामुख कप महिला भलिबलको उपाधि रक्षा | NepalDut
एपीएफद्वारा दोस्रो सभामुख कप महिला भलिबलको उपाधि रक्षा
दोस्रो सभामुख कपको उपाधि उचाल्ने नेपाल पुलिस क्लबको जोशलाई एपीएफले पोखरा रंगशालाको भलिबल कोर्टमा फेरी एकपटक मत्थर बनाउँदै उपाधि रक्षा गरेको छ । नेपाल पुलिस क्लब उपाधिबाट विमुख हुदैं उपविजेतामै चित्त बुझाउँदै दोस्रो सभामुख कप भलिबल प्रतियोगिताको यात्रालाई विट मार्यो ।
१२ वर्षे सशस्त्र जनयुद्धको शुरुआत भएको जिल्ला रोल्पाको लिवाङबाट शुरु भएको सभामुख कप राष्ट्रिय महिला भलिबलको दोस्रो सस्करणको उपाधि विभागीय टोली एपी एफको पोल्टामै पर्यो । पोखराको रंगशालामा शनिबार भएको उपाधि भिडन्तमा विभागीय प्रतिद्वन्द्वी नेपालपुलिस क्लबलाई ३–१ को सेटमा हराउँदै गर्दै साविकको विजेता एपिएफले पुनःउपाधि चुम्न सफल भयो । दोस्रो संस्करणमा पनि विजयी हुन सफल एपिएफले उपाधि सहित नगद तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ भने पराजितपुलिसले १ लाख ७५ हजारमा चित्त बुझायो ।
दोस्रो पटक उपाधि रक्षा गर्ने क्रममा एपीएफले पुलिसमाथि ३–१ सेटको नजिता निकाल्यो । पहिलो सेट नेपाल पुलिसमाथि शसस्त्र हावी रह्यो । पुलिसले दुई अंक जोड्ने क्रममा शसस्त्रले भने १७ अंक जोडेको थियो । कुनै समय ७–६ को स्थितिमा एपीएफले लगातार ११ अंक जोड्यो । रेष्मा भण्डारीको सर्भिसमा प्वाईन्ट निरन्तर जोडिएपछि पुलिसले दुई पटक टाईम आउट लिन बाध्य भयो । पुलिसले एक जोड्दै ७ पुर्यायो । एपीएफले फेरी एक अंक जोड्यो । पुलिसले ८ अंक बनाउँदा एपीएफले १९ बाट लगातार फेरी अंक जोड्दै पहिलो सेट २५–८ मा लिदंै पुलिसलाई दोहोरो अंकको स्कोरमुनि नै राख्यो ।
पहिलो सेट जितेर उत्साहित भएको एपीएफ भने दोस्रो सेटमा उस्तै शैली दोहोर्याउन भने सकेन् । शुरुवातबाटै पुलिसले लिएको अग्रतालाई जोगाई राख्यो । अन्तत दोस्रो सेट नेपाल पुलिस क्लबले २५–१९ मा लिदैं खेललाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन उद्दत देखियो । तर तेस्रो र चौथो सेट भने पुलिसले प्रदेश नं ३ सँग अघिल्लोदिन गरेको प्रदर्शन दोहोर्याउन सकेन् । क्वीक र प्लेसिङमा माहिर मानिएको पुलिसले फाईनलमा भने प्रभावशाली बनाउन सकेन् । तेस्रो सेट २५–१७ र चौथो सेट पनि २५–१७ मा लिदैं एपीएफले पोखराबाट दोस्रो सभामुख कप राष्ट्रिय महिला भलिबलको उपाधि उचाल्दै काठमाडौंमा आयोजना हुने ढोरपाटन डबल लिग महिला भलिबलको तयारीमा जुट्न प्रस्थान गर्यो ।
पोखरमा सम्पन्न प्रतियोगिता पछि एपीएफले २०७५ सालमा जितेको सातौं उपाधि हो । २०७५ सालमा भएको आठ प्रतियोगिता मध्ये एपीएफले सातवटा प्रतियोगितामा बाजी मार्न सफल भएको हो । एपिएफले यसअघि सम्पन्न शेहबहादुर प्रतिष्ठानको आयोजना भएको प्रतियोगिता, पोखराको लामाचौरमा सम्पन्न तीज राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिता, न्यु डायमन्ड कप राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिता, एनभिए लिग, बाग्गुङमा सम्पन्न २२औं राष्ट्रिय महिला च्याम्पियनसिप र रोल्पाको लिवाङमा भएको प्रथम सभामुखकप महिला राष्ट्रिय भलिबलको उपाधि जितेको थियो । काठमाडौंमा भएको अवाधिवादी प्रतियोगितामा विदेशी खेलाडी सम्मिलित चितवन टाइर्गसले फाइनलमा एपिएफलाई पराजित गर्दा उपविजेतमा खुम्चिएको थियो ।
शनिबारै तेस्रो स्थानका लागि भएको प्रतियोगिताको फाइनल खेलमा घरेलु टोली गण्डकी प्रदेशलाई पराजितगर्दै प्रदेश नं. ३ तेस्रो भयो । अधिकांश काठमाडौंको पुरानो नैकापस्थित न्यु डायमन्ड एकेडेमीको खेलाडीको बाहुल्यता रहेको टोलीले गण्डकी प्रदेशलाई ३–१ मा हराउन सफल भएको हो । पहिलो सेटमा २५–१४ को जित निकालेको प्रदेश नं ३ ले दोस्रो सेट घरेलु प्रदेशलाई २०–२५ ले सुम्पियो ।
खराब लयका कारण सेमिफाइनलमा पराजित भएको प्रदेश नं ३ ले तेस्रो सेट भने प्रतिभा मालीको उत्कृष्ट स्पाइकको मद्दतमा २५–१४ पुनः खेलमा फर्किन सफल भयो । दुई सेटको जितपछि उच्च मनोबलमा रहेको प्रदेश नं ३ ले चौथो सेटमा २५–१७ को जित निकाल्यो । प्रतियोगितामा तेस्रो बनेको प्रदेश नं ३ ले नगद १ लाख रुपैया प्राप्तग¥यो । उता सान्त्वना बनेको घरेलु टोली गण्डकी प्रदेशले भने नगद ५० हजार रुपैयाँमा चित्त बुझायो ।
छ दिनसम्म सञ्चालन भएको प्रतियोगितामा उत्कृष्ट स्पाइकर प्रदेश नं. ३ की प्रतिभा माली घोषित हुँदा उत्कृष्ट ब्लकर एपीएफकी हिरा केसी भइन् । यस्तै, उत्कृष्ट सेटर नेपाल पुलिस कमला पुन बन्दा उत्कृष्ट लिब्रो नेपाल पुलिसकै शान्ति तामाङ र उत्कृष्ट सर्भर गण्डकी प्रदेशकी अरुणा शाही घोषित भइन् । यस्तै उत्कृष्ट प्रशिक्षक एपिएफका ज्ञानेन्द्र विष्ट चुनिए ।
उत्कृष्ट सबैले नगद ५÷५ हजार रुपैयाँ हात पारे । यस्तै प्रतियोगितामा सर्बोत्कृष्ट खेलाडी एपिएफकी सरस्वती चौधरी बन्दै नगद १० हजार रुपैयाँ हात पारिन् । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको आयोजना सञ्चालन भएको प्रतियोगितामा तीन विभागीय टोली सहित सात प्रदेशका सात टोलीले सहभागिता जनाएका थिए । प्रतियोगितामा विजेता खेलाडीलाई गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङ, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष सम्पन्न श्रेष्ठ लगायतले पुरस्कार प्रदान गरेका थिए ।